Humni Addaa WBO Ajajaa 100 dabalatee 13 yeroo ajjeesu, 20 ol madeeyse. – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
Humni Addaa WBO Ajajaa 100 dabalatee 13 yeroo ajjeesu, 20 ol madeeyse.
– MUDDE 01,2016) Humni Addaa WBO Awaash Waraana Wayyaanee Agaazii Haleelee Injifannoo Boonsaa Galmeesse; Aashaa Dawwalleetti Ajajaan KomandPost Humna Addaa WBOn Ajjeefame.
Gootichi Humna Addaa WBO guyyaa har’aa Mudde 1,2016 Aashaa Dawwalleetti Ajajaa Komandpostii wayyaanee kan ta’e Ajajaa 100 Haayilee Abarraa jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen du’aan adabee jira. Haayilee Abarraa diina jabaa kan komandpostii fudhatee naannoo keessa luffisuun yakka adda addaa raawwatu ta’uun isaas barameera.
Gama biraan Gootichi Humna Addaa WBO Awaash Sadaasa 30,2016 halkan keessaa sa’aa 4:30tti humna waraana wayyaanee Agaazii jedhamu kan Awaash irraa ka’ee gara kaampii Chaayinaa jedhamu deemaa ture haleeluun 13 yeroo ajjeesu, 20 ol ammoo madeessuun injifannoo cululuqaa galmeesse.
Tarkaanfii kanaan Humni Addaa WBO Awaash kilaashii 4, matirayesii/PKM 2 fi mi’oota waraanaa biroo diina irraa booji’ee jira.
Tarkaanfii laalessaa kan ummata Oromoo hedduu fixuun beekamu Agaazii irratti fudhatame kanatti kan rifate mootummaan wayyaanee humna waraanaa biroo bobbaasuun sakattaa jabaa Awaash irratti adeemsisaa akka jirus barameera.
Humni Addaa WBO Awaash baatii Onkoloolessaa darbe keessa tarkaanfii Matahaaraa keessatti fudhateen Agaazii 27 ajjeesuu dabalatee waliigalatti Agaazii 56 ol naannoo kanatti galaafatuun isaa kan yaadatamuu dha.
Ji’uma Onkoloolessaa keessa Booset keessatti lola jabaa waraana wayyaanee waliin kan geggeesse oggaa ta’u, meeshaaleen waraanaa qawween 200 ta’us ummataaf akka kennamu taasifamuun ni yaadatama. Poolisootni Oromiyaa gara qabsoo ummata isaaniitti akka makamanii fi leenjii barbaachisu akka fudhataniif gumaacha adda addaa kan godhe Humni Addaa WBO Awaash, qabeenya mootummaa wayyaanee madda galii ta’aniif gara garaa irrattis tarkaanfii fudhatuun daaressaa akka turee fi jiru gabaafameera.